Weerarada Israel ay ku hayso Gaza oo sii xoogeystay
Ku dhawaad 40 qof ayaa ku dhimatey weerarka Israel ay ku hayso Marinka Gaza iyo rabshado ka dhacay Qudus, ayada Hamas iyo ciidamada Israel ay gantaallo is-weydaarsanayaan, wuxuuna Arbacada maanta u muuqdey dagaalku mid sii xoogeystey.
Israel ayaa qaadey wareeg cusub oo weerar dhanka cirka ah oo laga fuliyey Marinka Gaza aroortii saaka, waxaana ay bartilmaameedsadeen saldhigyada booliska iyo amaanka, dhismo dhowr dabaq ka koobnaa oo ay dad rayid ah degenaayeen iyo dhismayaal xafiisyo ah.
Weeraradaasi ayaa bur bur xoogan uu ka soo gaarey dhismaha xafisyada ah hase yeeshee, qofna kuma jirin dhismahan xiligii la duqeynaayey.
Sidoo kale weerardii kan ka horeeyey ee Taladadii shaley ayaa dhulka dhigey dhismo dhowr dabaq ka koobnaa oo deegaan ah kaasoo ay ku yaaleen dhowr xafiis oo Hamas ay laheyd, dadka deegaankaasi ka ag dhawaa ayaa ka hor duqeyntaasi loo digey loona sheegey ina y dhismahaas ka fogaadaan.
Dhinaca kalena 5 qof oo Israa’iliyiin ah ayaa ku dhintey gantaalaha Hamas ee Talaadii iyo aroortii hore ee saaka, Hamas ayaa gantaalo ku weerartey magaalada Tel Aviv, dagaalkan ayaa ahaa kii ugu weynaa ee labada dhinac dhex mara tan iyo sanadkii 2014-ka.